Ravalomanana sy Rajoelina teny Analakely “Tsy misy maharesy vahoaka izany”
Nandrasan’ny rehetra ny fahatongavan’ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny Filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina tetsy anoloan’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly. Naneho fiaraha-miory tamin’ny fianakavian’ny maty noho ny savorovoro narahina fampiasan-kery ny sabotsy lasa teo, ka nahafaty ireo roalahy nentina nomem-boninahitra eny an-toerana.
José Vianey Mitaky lalam-pifidianana eken`ny rehetra
Manoloana ny zava-nitranga ny 21 Aprily 2018 dia naneho ny heviny ny antoko RAM na ``Rassemblement pour l`Avenir de Madagascar``, izay tarihin` i José Vianey. Nambaran`ity filoha nasionalin`ny RAM fa ao anatin`ny tarigetran`ny antoko ny fampihavanana ny samy Malagasy sy ny fanorenana ny firenentsika.
MTSn-dRolland Ratsiraka Mitaky fifanakalozan-kevitra araky ny maha samy Malagasy
Namory ny mpanao gazety tetsy amin`ny IBIS Hotel Ankorondrano, omaly tolak`andro, ny teo anivon`ny antoko Malagasy Tonga Saina izay nanao fanambarana manoloana ny raharaha nitranga ny 21 aprily lasa teo.
Sehatra iraisam-pirenena Manindry mafy mba hisian’ny fifampiresahana
Nihaona tamin’ny filoha Rajaonarimampianina teny Iavoloha omaly ny masoivohon’ny vondrona Afrikanina eto Madagasikara Rtoa Hawa Ahmed Youssouf , sy ny solontenan’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana Rtoa Violet Kakyomya .
Lalao Ravalomanana Miantso ny FFKM handray andraikitra
Nanao fanambarana, teny amin’ny trano fonenany eny Faravohitra, amin’ny maha Reny azy omaly ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana.
DFP sy FDC Miantso fanotronana ny hetsiky ny depiote
Misy fotoana andinihana ary misy fotoana itenenana, hoy Tolojanahary Maharavo na Doudou, mpitarika ireo hetsika sy vovonana politika dinika ho fanavotam-pirenena (DFP) sy Force de changement (FDC), omaly, raha niverina naneho hevitra tetsy amin’ny fonenany etsy Ambohipo.
Hery Rajaonarimampianina Miantso ny ekipany tsy hikorapaka
Nandrasan’ny rehetra ny fanambarana hivoaka tao anatin’ny filan-kevitry ny minisitra omaly tolakandro teny Iavoloha notarihin’ny filoham-pirenena, taorian’ny diany tany Toamasina.
Tamin-kafaliana no nandraisan’i Marc Ravalomanana izany, ka nisaorany ny vahoaka manontolo. Nohamafisiny ny fahavononana hametraka ilay Madagasikara vaovao mandroso ka niantsoany ny vahoaka ho vonona sy sahy hatrany. Efa ao anatiko ao, ka tsy hamelako, tsy hamelanay, ary tsy hamelantsika mihitsy raha tsy azontsika ny tany vaovao, dia i Madagasikara miverina aminareo, hoy izy. Mahonena ny mahita ny olona noana. Noraisiny ohatra ny fahorian’ny olona hitany tany Toliara ny faran’ny herinandro teo sy ny teny amin’ny Paraky Ankadimbahoaka afak’omaly, izay vatomamy sisa no hanina. Raha tsy ho sahy amin’izay ihany ny vahoaka Malagasy amin’izao fotoana izao tsy ho sahy mandrakizay intsony, hoy izy. Dia milaza aminareo aho fa mila fahasahiana ity, ka na fampitahorana na fandrahonana na fanenjehana, tsy misy mandaitra amiko izany, fa mila anareo aho ho sahy hanaraka ahy, hoy ny fampanantenany. Mila anareo aho hieritreritra ny tena hoavin’ny firenena, ary manàna « vision ». Manàna ianareo fahasahiana, manàna ianareo fanantenana, ary rehefa manana fanantenana ianareo tsy maintsy misy fiovana io, hoy izy. Betsaka no niantso manoloana ny vaovao an-gazety isan-karazany momba ny fanenjehana na hisamborana azy, toy Vondrona Eoropeanina, ny Frantsay sy ny hoe: aiza ianao ? Tsy ny eto Magadasikara ihany no manara-maso antsika, fa izao tontolo izao. Efa miakatra isika ary efa mandeha amin’ny làlana tokony hizorana amin’ny demokrasia, ka aza matahotra milaza izany intsony, hoy ny antsony. “Aza matahotra, fa aleo izy hisambotra eo ahitantsika azy”, hoy izy. Noho izany dia hanana tany vaovao isika, hanana Madagasikara vaovao, hanana fampandrosoana vaovao. Fa rehefa milaza aminareo aho hoe tongava ianareo dia tonga, milaza aho hoe izao atao dia atao! Horakora-pahavononana no setriny nataon’ny vahoaka maro be!
“Tsy maintsy vitantsika mandroso i Madagasikara”
Izay fahaizako sy fahakingako, izay talenta nomen’Andriamanitra ahy tsy hohazoniko izao samirery na homeko ny vady aman-janako fotsiny, fa homeko ny vahoaka Malagasy, hoy hatrany i Marc Ravalomanana. “Tsy maintsy vitantsika mandroso ity Madagasikara ity, mihinan-kanina ireo olona ireo”, hoy izy. Fotoana izao mba hilazantsika ny tena marina satria ity taona 2018 ity dia tena kihon-dàlana anankiray eto amin’ny tany sy ny fanjakana hisafidianann’ny vahoaka Malagasy an-kahalalahana amin’ny fomba demokratika, ary indrindra famelana malalaka ny olona rehetra. Anjaran’ny vahoaka tompom-pahefana no misafidy izay tiany, izay mendrika, ary iza no hahavita, izay no fanantenana, hoy I Marc Ravalomanana. Omaly ihany, dia lasa nisidina any ampitan-dranomasina I Marc Ravalomanana, ary nilaza hihaona amin’ny filoha Kenianina Uhuru Kenyatta, laharana faharoa taoriany tamin’ilay fifaninana “ALM Person of the year 2017”, mialohan’ny fahatongavany any Frantsa. Hihaona amin’ny mpanohana Frantsa ny sabotsy 13 janoary ho avy izao, ka ao Parisy no hanaovana azy io.